Maandooriyeyaasha iyo qaar ka mid ah dumarka dalka Soomaaliya - BBC News Somali
Maandooriyeyaasha iyo qaar ka mid ah dumarka dalka Soomaaliya
Xigashada Sawirka, NISSA
Shir lagu qabtay magaalada Muqdisho ayaa waxaa ka soo qeybgalay qaar ka mid ah dad ka socda bulshada ra'yidka ah, xubno ka tirsan maamulka Banaadir, dhakhaatiir iyo culumada.
Masuuliyintii ka soo qeybgashay shirka ayaa sheegay in heerka maandooriyaha marayo maanta uu yahay mid aad u sarreeya dadka ugu badan ee uu maandooriyaha dhibaato ka soo gaarta ayaa ah dumarka.
In muddo ahba waxaa soo kordheysay cabasho ka soo yeereysa bulshada oo ku saabsan in falal anshax darro ah oo ka soo horjeeda diinta islaamka iyo dhaqanka Soomaaliyeed lagu sameeyo halkaas.
Sidoo kale waxaa jiray warar sheegaya in gudaha hoteellada iyo makhaayadaha lagu isticmaalo maandooriyeyaal uu xashiishku ka mid yahay.
Isticmaalka maandooriyaha ayaa waxa ka dhalan kara falal dambiyeedyo la xiriira kufsiga, dilka iyo dhaca, waxayna qaar ka mid ah musuulintii ay waalidiinta iyo macalimiinta ugu baaqeen in ay ka qeybqaataan sidii lagu soo gabagabayn lahaa arrinkan.
Tan ayaa imaanayso maalmo kaddib markii la mamnuucay in saacado ka mid ah habeenkii ay furnaadaan meherada ku yaala xeebta Liido.
Jawaahir Baarqab: Waxaa jira dad maandooriye siiya gabdhaha da'da yar
Warqad ka soo baxday xafiiska Guddoomiyaha gobolka Banaadir ahna Duqa magaalada Muqdisho Cabdiraxmaan Cumar Cismaan (Eng Yariisoow), ayaa lagu qeexay in ciddii amarkaas u hogaansami weyda ay wajihi "doonto ciqaab sharciga waafaqsan".
Amarkaas oo ay shaacisay warbaahinta dawladda ayaa sidoo kale lagu yiri "xeebta Liido waa goob shacabku isugu yimaado laguna nasto ,mana lagu isticmaali karo wax maandooriye ah, noocuu doono ha ahaadee, cid walba oo falkaas ku kacdana, waxaa hay'adaha amniga la farayaa in tallaabo ay ka qaadaan, sharcigana horkeenaan".
Dadka isticmaala maandooriyaha sida xashiiska ayaa isugu yimaada xarumaha xiiliga dambe ee habeenka. Dhibaatada ugu weyna waxaa wajaha gabdhaha.
Jawaahir Baarqab oo ah guddoomiyaha ururka haweenka ee Gobolka Banaadir ayaa horay BBC u sheegtay in ay jiraan dad "gabdhahaas siiya tubaako la yiraahdo Tabuu, taasoo marka ay dawakhiso ka dib la geeyo guryo gabdhahaas lagu haysto".
Sababta haysashada ayey ku sheegtay in ay ka dambayso ujeeddo dhaqaale oo ah in "lacagaha dibadaha looga soo diro ay la cunaan".
Meelaha ay Jawaahir Baarqab farta ku fiiqday waxaa ka mid ah xeebaha loo tamashle tago
Mar wax laga weydiiyey sababta ay wax uga qaban la' yihiin ka maamul ahaan arrintan, marba haddii ay ogaadeen inay jiraan guryo la geeyo gabdho da' yar oo halkaa lagu hayo ayey Jawaahir Baarqab tiri "ma doonayo in aan ka hor dhaco, waxaan doonaynaa in aan xogta la wadaagno laamaha amniga".
Qaar ka mid ah dhagaystaasha BBC oo aan la hadalnay ayaa soo dhiibtay fikrado badan oo ku aadan arrinkan. Muxuyidiin Maxamud oo ka mid ah dhagaystayaashenna ayaa yiri " waa mid aad looga xumaado maandooriyaha ku soo badanaya dalka, waxayna ilatahay in dowladda ay ku dadaasho sidii ay u baajin lahaayen una tirtiri lahaayen sidii ay diinta iyo akhlaaqda diinta Islaamka, waaxana rajaynaa in dowladda ay wax ka qaban doonto arrinkan."